........HIGH WAY UP !: တက္ကသိုလ်နှင့်စာကြည့်တိုက်
စာကြည့်တိုက်ဟူသည်မှာ ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် တည်ရှိနေကြပေသည်။ ပထမဦးစွာ မိမိနှစ်သက်ရာ စုဆောင်းထားရှိထားသော မော်ကွန်းတိုက်များ၊ ထိုမှတဆင့် အဆင့်ဆင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာကာ ယခုမြင်နေရသော အများသူငှာတို့ လေ့လာမှတ်ရှုနိုင်သော နေရာဌာနတစ်ခုအဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာပေသည်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အဓိကမောင်းနှင်အားများ မွေးထုတ်ပေးသော တက္ကသိုလ်များသည်လည်း ကျောင်းသား၊သူများအား လိုအပ်သမျှလေ့လာစရာ အစုံအလင်ကို စာကြည့်တိုက်ဟူသော ထိုနေရာတွင် စုစည်းထားရှိပေးကာ နိုင်ငံတကာနှင့် ရင်ဘောင်တန်းနိုင်သော အမျိုးကောင်းသားသမီးများ
မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန်ကြိုးစားကြလေသည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရှိ စာကြည့်တိုက်များ၏ အခြေအနေ အဆင့်အတန်းကို သိရှိရုံဖြင့် ယင်းနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ထိုနိုင်ငံရှိတိုင်းသူပြည်သားတို့၏ ပညာရည်မြင့်မားမှုတို့ကို ခန့်မှန်းသိရှိနိုင်ပေသည်။
ထိုသို့အရေးပါလှသော စာကြည့်တိုက်များကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးရှိ တက္ကသိုလ်များက ခေတ်နှင့်အညီ အမြဲဆန်းသစ်စေလျက် ကျောင်းသား၊သူတို့၏လက်ဝယ်အရောက်
ပေးအပ်နိုင်ရန်ကြိုးစားကြလေသည်။ စာကြည့်တိုက်ဟူသည်မှာ ရှေးယခင်က စာအုပ်များသာ ထားရှိသောနေရာအဖြစ်မှ ယခုအခါ သင်ကြားရေးတိပ်ခွေ၊ စီဒီများ၊ အင်တာနက်နှင့် အခြားအမျိုးမျိုးသော သင်ထောက်ကူပစ္စည်းတို့ စုဆောင်းထားရှိရာနေရာအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာပေသည်။
စာကြည့်တိုက်ပေါ်သို့ ရောက်ရှိလာသော စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ရေးသားပြုစုရသည်မှာ လွယ်ကူသောအလုပ် မဟုတ်ပေ။ အနည်းဆုံး နှစ် ၂၀၊ ၃၀ ခန့် အချိန်ယူရပေသည်။ ထို့အပြင် မိမိထုတ်ဝေလိုက်သော စာအုပ်
တစ်အုပ် အစဉ်အသုံးဝင်ခေတ်မှီစေရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရှိန်အပေါ် မူတည်၍ ၁၀နှစ်၊ ၁၅ နှစ်ခန့်ကြာသည်ရှိသော် New Edition ဟူ၍ ပြန်လည်ကာထုတ်ဝေလေ့ရှိကြသည်။ ယင်း New Edition ဆိုသည်မှာ ကုန်လွန်ခဲ့သော နှစ်များအတွင်း လက်တွေ့လောကတွင် သီဝရီများကိုမည်သည့်နေရာတွင် မည်ကဲ့သို့အသုံးချခဲ့ပုံ၊ ရှိပြီးသား သီဝရီများကို မွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်းများ၊ အသစ်ပေါ်ထွက်လာသော စိတ်ဝင်စားဖွယ် လေ့လာစရာနယ်ပယ်သစ်များ အကြောင်းကို ထပ်မံဖြည့်စွက်ကာ ပြန်လည်ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်လေသည်။
စာကြည့်တိုက်တစ်ခုတွင် အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သလို ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ထုတ်ဝေထားသော စာအုပ်များမရှိလျှင် ဘာဖြစ်မည်နည်း? အဖြေကတော့ရှင်းပါသည်။ကျောင်းသားများအနေနှင့် အသစ်အသစ်သော ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများ၊ ယင်းသီဝရီများကို အသုံးပြု၍ ယခုလက်တလော အချိန်တွင် မည်ကဲ့သို့သောပြသနာများကို ချဉ်းကပ်နေကြသည်၊သီဝရီအသစ်များ၊ ထပ်မံမွမ်းမံခြင်းများ၊ သီဝရီအသုံးချခြင်းတို့ဘက်တွင် အားနည်းခြင်းစသော ဆိုးကျိုးများကို ခံစားကြရပေမည်။ အထူးအရေးကြီးသည်မှာ ကျောင်းသားများအား မိမိနယ်ပယ်နှင့်ပက်သက်၍ အမြင်ကျယ်သင့်သလောက် မကျယ်ဖြစ်စေလေသည်။
စာအုပ်တစ်အုပ်အတွက် နှစ် ၃၀၊ နောက် ၁၅ နှစ်ခန့်ကြာသော် ထပ်မံပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခြင်း..... ထိုသို့ဆိုလျှင် ယင်းနယ်ပယ်ရှိ အကြောင်းအရာသစ်များ၊ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုများကို သိရှိလိုသော် ၁၅ နှစ်ခန့်စောင့်ရပေမည်။ ကမ္ဘာကြီးသည် အပြိုင်အဆိုင် ကျားကုပ်ကျားခဲ သူ့ထက်ငါအပြိုင် ကြိုးစားနေရသော ခေတ်ကာလသို့ရောက်ရှိနေပေသည်။ ထို့ကြောင့် ၁၅ နှစ်မပြောနှင့် ဖြစ်နိုင်လျှင် ၁၅ မိနစ်ပင်မစောင့်သင့်ပေ။ ထိုအခါ ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်ကြသနည်းဆိုသော် နိုင်ငံတကာရှိ စာတမ်းဖတ်ပွဲများသို့ လှည့်လည်တက်ရောက်ကာ မည်သည့်နိုင်ငံရှိ မည်သည့်တက္ကသိုလ်ကတော့ လတ်တလော ဘာတွေလုပ်နေကြသည်၊ နိုင်ငံတကာရဲ့ ယခုလက်ရှိ သုတေသနလားရာကတော့ မည်သို့ရှိသည်တို့ကို လေ့လာကြကာ မိမိတို့တက္ကသိုလ်၊ကျောင်းသားများအတွက် ဘာလုပ်သင့်သည်တို့ကို စဉ်းစား၍ အစီအမံချကာ အကောင်အထည်ဖော်ရပေသည်။
ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတို့တွင် ဆရာနှင့်အတူ ကျောင်းသားများပါ ထိုသို့သောစာတမ်းဖတ်ပွဲများသို့ အလွယ်တကူငွေကုန်ကျေးကြခံကာ သွားရောက်နိုင်သော်လည်း၊ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတို့တွင်တော့ မဖြစ်နိုင်ပေ။ သို့သော် အနည်းဆုံးအနေဖြင့် ဆရာတစ်ဦးသည် မိမိတက်ရောက်သင့်သော၊တက်ရောက်လိုသော နိုင်ငံတကာစာတမ်းဖတ်ပွဲနှင့် တွေ့ဆုံပွဲများသို့ သွားရောက်နိုင်သင့်ပေသည်။ ကျောင်းသားအတွက်မူ ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားတစ်ဦးလျှင် ပြည်တွင်းစာတမ်းဖတ်ပွဲတစ်ကြိမ်နှင့် ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားအတွက် နိုင်ငံတကာစာတမ်းဖတ်ပွဲ တစ်ကြိမ်တော့ တက်ရောက်စေသင့်ပေသည်။ ယင်းသည်လည်း ပြဌာန်းမထားသောပြဌာန်းစာအုပ် တစ်အုပ်ဖြစ်ပြီး ကျောင်းသား၊သူများအနေနှင့် အတွေ့အကြုံ ဗဟုသုတများ ရရှိစေကာ ပညာရဲရင့်ပွဲလယ်တင့်စေပေမည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်တို့အပြင် ၂၁ ရာစု၏ အခြားထူးခြားသော စာကြည့်တိုက်အသွင်သဏ္ဍာန်မှာ သက်ဆိုင်ရာပညာရပ်နယ်ပယ် ရှေ့ပြေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ digital library များအား အသုံးပြုခွင့်ကို ၀ယ်ယူချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြင့် ကျောင်းသားသူများအား အချိန်နှင့်တပြေးညီ လိုအပ်သော အချက်အလက်တို့ကို အလွယ်တကူ ရရှိစေပေသည်။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသူဟူသည်မှာ အနာဂတ်၏ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်၊ စာကြည့်တိုက်ဟူသည်မှာ ထိုလူငယ်တို့အတွက် ရတနာသိုက်ဖြစ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် စာကြည့်တိုက်တွင် စာအုပ်များပြည့်ပြည့်စုံစုံထားရှိပေးခြင်း၊ နိုင်ငံတကာစာတမ်းဖတ်ပွဲများတွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲစေခြင်း တို့ဖြင့် အနာဂတ်တွင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသော၊ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမြင့်မားသော လူငယ်များမွေးထုတ် နိုင်ပေမည်။ ယင်းသို့သော ကျောင်းသားလူငယ်များ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခြင်းသည် တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက် အခြေခံကြသော ပြင်ဆင်မှုပင်ဖြစ်လေသည်။
အတွဲ ၈ ၊ အမှတ် ၄၇